किलोको आठ सय रुपैयाँमा कुरिलो बिक्रि - krishipost.com
किलोको आठ सय रुपैयाँमा कुरिलो बिक्रि
चितवन, १७ जेठ ।
पश्चिम चितवन शुक्रनगरका सुमन सुवेदीलाई अचेल निकै चटारो छ । बिहानै उठेर बारीमा जान्छन् । पलाउँदै गरेका कुरिलोको टुसा टिप्छन् । सफा गर्ने, मिलाउने र तौलेर मुठा पार्दा पार्दै व्यापारीहरू घरमै आउँछन् । ‘किलोको आठ सय रुपैयाँका दरले यहींबाट कुरिलो बिक्री गरेको छु,’ युवा किसान सुमनले सुनाए । उनले दिनमा कुरिलोको ४० किलो टुसा बेच्ने गर्छन् ।
कुरिलो पोषक तत्त्व भरपुर भएको तरकारी मानिन्छ । ‘त्यसैले कोरोनाका बेलामा कुरिलो खोज्न मान्छेहरू घरमै आउने गरेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा यस्तो चापाचाप खासै थिएन,’ सुमनले भने । माग बढ्दै गए पनि उत्पादन त्यत्ति धेरै छैन । जसले गर्दा मूल्य पनि ठिकै पाएको उनले बताए । उनले चार वर्षयता कुरिलो बेच्न थालेका हुन् । एक बिघामा उनले कुरिलो खेती गरेका छन् । चैतदेखि भदौसम्म कुरिलोमा टुसा लाग्छ ।
बीचमा एक महिना टिप्न रोक्ने गरेको उनले बताए । पाँच महिना लगातार दिनको ४० किलोको दरले करिलो टिप्ने गरेको उनले सुनाए । उनले एक बिघामा कुरिलो लगाउँदा २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताए । कुरिलोको मूल्य कम्तीमा तीन सयदेखि बढीमा किलोको दुई हजार रुपैयाँसम्म आउने गरेको छ । सामान्यतः सात/आठ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको उनले बताए ।
पहिला उत्पादन भए पनि बिक्रीमा समस्या थियो । ‘योपटक कोरोनाले कमजोर बनाएकाहरूले खानुपर्छ भनेर धेरै खोज्दै आए,’ सुमनले भने । चितवन मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा स्त्री रोग तथा प्रसूति विभागमा कार्यरत चिकित्सक डा. वसन्त शर्मा कुरिलो खनिज र भिटामिनले भरिपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘सुत्केरीका लागि लाभदायक छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ ।
यसमा रोग प्रतिरोधी क्षमता हुन्छ । त्यसैले भाइरसले गलाएका, शल्यक्रिया गरेकाहरूले पनि खान्छन् । ‘सबैलाई कुरिलो लाभकारी नै छ,’ डा. शर्माले भने । कुरिलोको टुसा उसिनेर सुप बनाएर या अन्य तरकारीमा मिसाएर खान सकिने उनले बताए ।